बढी रकम लिने मेडिकल कलेजबिरुद्ध सरकारको यस्तो एक्सन, अब कसैलाई नछाड्ने !::Nepal's Digital News Portal
बढी रकम लिने मेडिकल कलेजबिरुद्ध सरकारको यस्तो एक्सन, अब कसैलाई नछाड्ने !
आगामी १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय
बन्दीपुर टाइम्स सम्वादाता
काठमाडौं– नेपाल सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीका गुनासो सम्बोधन गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ।
आगामी १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवव विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुललपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षसहित राखेर गरेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा ठगी मुद्दा चलाउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर पठाउने समेत निर्णय भएको छ। सरकारले भनेको छ, ‘विद्यार्थीसँग तोकिए भन्दा बढी रकम लिएको भए १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न गराउन सूचित गरिन्छ। सम्बन्धित मेडिकल कलेजले उक्त समयभित्र रक फिर्ता वा समायोजन नगरे कारबाही गरिनेछ।’
विद्यार्थीहरुले १५ दिनभित्र रकम नपाए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन भनिएको छ। प्रशासन कार्यालयलाई ठगी मुद्दा अघि बढाउन सरकारले अनुमति दिएको छ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मेडिकल कलेजले दिएको सकारात्मक योगदानको कदर गर्दै १५ दिनको समय दिएका हौं । हामीलाई ठगी मुद्दा चलाउन मन छैन, तर बाध्य हुनछौं। फेरि एकपल्ट आफ्ना विद्यार्थीका समस्या आफैं समाधान गर्न अवसर दिएका छौं।’ उनले सोमबार नै ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउने पनि जानकारी गराए।
निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन्। उनीहरुलाई परीक्षा र पठनपाठनमा फर्किन समेत मन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । साथै आफू सुरक्षित हुन मेडिकल कलेजका अवैधानिक शर्त मान्ने विद्यार्थी अभिभावकलाई सजग गराए। उनले भने, ‘जुनसुकै शर्तमा आफू सुरक्षित हुन पनि खोज्ने र सरकारले केही गरेन पनि भन्ने विद्यार्थी र अभिभावकले नगरिदिनुहोला।’
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक सरकारलाई तालाचाबी बुझाएर उन्मुक्ति नपाउने पनि उनले बताए। समस्या समाधान नभए कानूनी कारबाही हुनेतर्फ सचेत गराए।
पाथिभरा माताको दर्शन गरि के कस्तो छ तपाइको आजको दिन हेर्नुहोस्
आज हरिबोधिनी एकादशी: श्री पशुपतीनाथको दर्शन गरि आज यी कुन राशिको भग्य चम्कदै छ हेर्नुहोस !
नेपाललाई फेरी अर्को सफलता
चोरले पसल फोडेर प्याज लिए, पैसा लिएनन्
प्रम स्वास्थ्य अपडेट : मल्टी ओर्गान फेल भई थप जटिल हुन सक्ने
ठग ठेकदारहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले दिए यस्तो चेतावनी !
ठेकेदारहरु बिरुद्ध प्रधानमन्त्रीको अर्को एक्सन, काम नगर्नेको ठेक्का खोसिने !
राष्ट्रियतासंग चुनावी सोदावाजी नगर्न कांग्रेसलाइ प्रचण्डले दिए यस्तो चेतावनी !
प्रधानमन्त्रीले बढी नै माया गर्नुभयो: उपेन्द्र यादव
‘यो बर्षको बालुन डि’ओरको लागि भान डाइक योग्य छन’ – जुर्गेन क्लुप
बागी उम्मेदवार चौधरीबिरुद्ध नेकपाले लियो यस्तो एक्सन !
किन आउदै छन् रुसका राष्ट्रपति पुटिन नेपाल ?